Setimadi Dainikस्थानिय Archives - Setimadi Dainik
७ बर्षपछि उद्योग विकास मनाङ उद्योग अधिकृत
मनाङ २१ मंसिर । हिमाली पारीको जिल्ला मनाङमा रहेको उद्योग विकास शाखा मनाङले ७ बर्षपछि उद्योग अधिकृत पाएको छ । २०६९ साल देखि नायब सुब्बाको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको शाखामा उद्योग अधिकृतका रुपमा प्रदीप न्यौपाने हाजिर गरेसगै उद्योग विकास शाखा मनाङले उद्योग अधिकृत पाएको हो । उद्योग अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका […]
विवादै विवाद बीच न्यौपाने प्रअमा नियुक्त
दमौली २० मंसिर । विवादै विवाद बीच व्यास ७ स्थित क्यामिन माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकमा विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक सन्तौष न्यौपाने नियुक्त भएका छन् । यसअघि न्यौपानेलाई प्रअमा नियुक्तका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले व्यास नगरपालिकालाई सिफारिस गरेको थियो । न्यौपाने संग विद्यालय विकास प्रस्ताव दर्ता गराएका विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक कृष्णहरि गैह्रेले दर्ता […]
महालक्ष्मीको दमौली शाखा उद्घाटन आज
दमौली १९ मंसिर । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको दमौली शाखा आज उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । शाखा इन्चार्ज सुदिप न्यौपानेले जानकारी दिए अनुसार शाखाको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
व्यास नगरपालिकाका कार्यकारी बास्तोलाको बिदाई
दमौली १८ मंसिर । व्यास नगरपालिकाका प्र्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद बास्तोला र व्यास ७ का वडा सचिव रामराजा न्यौपानेको बिदाई भएको छ । बिदाई भएर गएका प्रशासकिय अधिकृत वास्तोला र वडा सचिव न्यौपानेलाई सोमबार कार्यालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी बिदाई गरिएको छ । नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने सहित अन्य जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुले […]
रत्नहरीमा मेमोरियल अस्पतालले पनि सुरु गरयो बालरोग विशेषज्ञ सेवा सुरु
दमौली १८ मंसिर । व्यास ४ स्थित रत्नहरि मेमोरियल अस्पतालमा पनि बालरोग विशेषज्ञ सेवा सुरु गरेको छ । अस्पतालले दिएको जानकारी अनुसार अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञ डा. मुकुन्द तिमिल्सेनाले बिरामी बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेछन् । दमौलीमा बालरोग विशेषज्ञको सुविधालाई मध्यनजर गरी बालरोग विशेषज्ञ सेवा गरेको जनाएको छ ।बालरोग विशेषज्ञ डा. तिमिल्सेनाले […]
न्यौपाने गण्डकी प्रदेश संयोजकमा चयन
दमौली १६ मंसिर । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति एकीकृत कर्मचारी संघको ७ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन राजधानीमा सम्पन्न भएको छ । सो महाधिवेशनबाट घरेलु कार्यालय मनाङगका प्रमुख प्रदिप न्यौपाने गण्डकी प्रदेश संयोजकमा निर्वाचित भएका छन् । न्यौपाने सर्वसम्मत रुपमा संयोजकमा चयन भएका हुन् ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा एकादशी मेला
दमौली ४ मंसिर । तनहुँ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा एकादशी मेला लागेको छ ।यसक्रममा सदरमुकाम दमौली स्थित सेतीबुल्दी घाट , शिशाघाट , जंगली महादेव ,मरस्याङदीका विभिन्न घाटहरुमा एकादशी मेला लागेको थियो । एकादशी मेला भर्नका लागि भक्तजनहरु बिहानै देखि फूलका लठ्ठा र डोली लिएर घाट तथा मन्दिरहरुमा पुगेका थिए । भजन […]
दोस्रो दिन महोत्सवमा दर्शकको संख्या उल्लेख्य टंक र अशोकको प्रस्तुतीमा दर्शक रमाए
दमौली २ मंसिर । तेस्रो आदिवासी जनजाति तनहुँ साँस्कृतिक एवं पर्यटन महोत्सवको दोस्रो दिन दर्शकको संख्या उल्लेख्य रहेको थियो । दोस्रो दिन महोत्सव सुरु हुन साथ दर्शक महोत्सव स्थल भित्र प्रवेश गर्नेक्रम जारी रहेको थियो । जुनक्रम साँझ सम्म रहेको थियो । दर्शकको संख्या उल्लेख्य भएसगै व्यापारिक स्टलहरुमा समेत भीडभाड […]
वडा अध्यक्षको सवारी साधनमा बन्दुक भेटियो
दमौली २ मंसिर । शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं ३का वडा अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठको सवारी साधानमा शनिबार वन्दुक भेटिएको छ । तत्कालिन एमालेबाट वडा अध्यक्ष श्रेष्ठको सवारी साधानमा भेटिएको बन्दुक प्रहरी बरामद गरेको छ । यद्यपी बन्दुकको लाइसेन्स भएको भने प्रहरीले जनाएको छ । वडा नं ३ मा पार्क विषयमा स्थानीय […]
मंसिर १२ मा क्षेत्रीय होटल संघको भेला
दमौली २७ कार्तिक । क्षेत्रीय होटल संघ तनहुँको १४ औं साधारण सभा मंसिर १२ मा हुने भएको छ । क्षेत्रीय होटल संघ तनहुँका सचिव विकास खनालले जानकारी दिए अनुसार साधारण सभाको हानका अध्यक्ष अमरमान शाक्यले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसैबीच क्षेत्रीय होटल संघ तनहुँका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा […]